अर्को अमेरिकी मानवअधिकार प्रतिबन्धहरु | TeraNews.net
मानवता विरुद्ध अमेरिकाको अर्को प्रतिबन्ध
लेखक निकिटिन यूजेनियस प्रकाशित गरिएको छ 27.12.2020
सहमत हुनुहोस्, अमेरिकी सरकारको नीति विश्व मञ्चमा एकदम अनौंठो देखिन्छ। विश्वका शासकहरू हुवावेलाई प्रयोगकर्ताहरूको जासुसी गरेको आरोप लगाएर चीनलाई पाठ सिकाउन चाहन्थे। मात्र एक पूर्ण भिन्न परिणाम भयो। तथ्या .्कका अनुसार २०२० को अन्तसम्ममा १ अरब चिनियाँ (१. billion अरब मध्ये) ले जनताको ब्रान्डलाई समर्थन गर्यो। त्यो हो, तिनीहरू Google सेवाहरू सद्भाव ओएसको पक्षमा त्यागे। र चिनियाँलाई रूसले सहयोग पुर्‍यायो जुन अमेरिकी प्रतिबन्ध अन्तर्गत छ।
नयाँ समस्याले चिनियाँ निगम टीसीएललाई असर गर्यो। यो एक लोकप्रिय ब्रान्ड हो जसलाई चीन सरकारले प्रोत्साहित गर्दछ। हामी सब्सिडी र ब्रान्ड प्रमोशनको बारेमा कुरा गर्दैछौं। अमेरिकी सरकारको आईटी विशेषज्ञहरूले टीसीएल टिभीको फर्मवेयरमा प्रयोगकर्ताहरूको जासूसी गर्ने ट्रोजन प्रोग्राम फेला पारेपछि अमेरिकाको समस्या खडा भयो।
तर यो त्यस्तो होइन कि अमेरिकीहरू क्रोधित भए, तर निर्माताले प्रणालीमा टाढाको हस्तक्षेप मालिकलाई सूचित गरे बिना। स्पष्ट हुनको लागि, TCL ले दूर मालिकलाई सूचित नगरी सबै टिभीहरूमा प्याच स्थापना गर्‍यो।
हो! सामसुले गरेजस्तै, जुन टाढाबाट यसको सबै खरानी टिभीहरू फेला पर्‍यो र फर्मवेयर बिग्रेको छ। अवैध रूपमा खरिद गरिएका टिभीका मालिकहरूले टिभी प्रदर्शनहरूमा सेतो पट्टि देखे। र पछि, कोरियाली निगम एलजीले यो धोखा दोहोर्‍यायो, फेरि, प्रयोगकर्तालाई सूचित नगरी। स्वाभाविक रूपमा, प्रश्न उठ्छ - किन TCL खराब छ, तर सामसु and र LG उत्कृष्ट छन्?
अमेरिकी सरकार आफ्ना जनताको बिरूद्ध खेलिरहेको छ
Google मा फेरि फिर्ता। यी वास्तवमै सुविधाजनक सेवाहरू हुन् जुन 99 XNUMX% भन्दा बढि प्रयोगकर्ताहरू सकारात्मक छन्। सशुल्क र नि: शुल्क अनुप्रयोग वा खेलहरू सबै प्रयोगकर्ताहरूले आनन्द लिन्छन्। तर "अमेरिकी सरकारको दिमागका खेल" को कारण, सबैजनाको मनपर्ने गुगल Huawei स्मार्टफोनबाट गायब भयो। सब भन्दा टेक्नोलोजिकल उन्नत र सस्तो उपकरण। यदि तपाईं एक सुन्दर स्मार्टफोन चाहनुहुन्छ भने, Harmon OS मा स्विच गर्नुहोस्।
डिसेम्बर २०२० सम्म, नयाँ अपरेटि system प्रणालीसँग १,००,००,००० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू पंजीकृत छन्। वास्तवमा, अमेरिकी सरकारमा 2020० बर्षे उमेरका मुर्खताका कारण मोबाइल प्रविधि - गुगलका लागि सेवाहरूको सर्तमा संसारको सब भन्दा राम्रो निगमले तुलनात्मक संख्यामा प्रयोगकर्ता गुमाएको छ। यो पहिलो संकेत थियो, तर त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया थिएन। अब TCL टिभीहरू। र भोली यो टिभी-बक्स र ट्याब्लेटहरू हुनेछ। र एक वा दुई वर्ष पछि हामी Google लाई पूरै बिर्सनेछौं। त्यहाँ आईओएस र हार्मोनी ओएस हुनेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिका सबैको बिरूद्ध खेल्छ र गेट बिना नै
हिजो - हुआवेई, आज - TLC, र भोली - ZTE। वा अर्को समान रूपमा प्रसिद्ध ब्रान्ड। यहाँ तपाईले कोडी अनुप्रयोग बिरूद्ध इ England्ल्यान्डको प्रतिबन्धहरू थप्न सक्नुहुन्छ। र जर्मनी र सम्पूर्ण यूरोपका लागि ग्यास पाइपलाइनको निर्माणको साथ समस्यालाई छोटकरीमा छुनुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि कुनै सीमाना छैन, र यसमा समस्या छ। यसलाई हटाउन कसैसँग कुराकानी गर्न आवश्यक छैन। ऐना उपायहरू लागू गर्न सकिन्छ।
अमेरिकी नीति अनुसरण गर्दै, तपाईं अमेरिकी कार किन्ने अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै पछि, सार्वभौमिक स्पेयर पार्ट्स तिनीहरूको मर्मतका लागि उपयुक्त छैनन्। र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट खाद्य उत्पादनहरू किन्न आवश्यक छैन, किनभने त्यहाँ युरोपियन एनालगहरू छन्। र तपाईं कपडा, निर्माण सामग्री र हात उपकरण बिना बाँच्न सक्नुहुन्छ। जर्मनी, इटाली, ताइवान, भारत र चीनसँग सयौं कारखानाहरू छन् जसले किफायती सामान्य सामानहरू बजारमा ल्याउँदछन्।
नयाँ २०२१ सम्ममा, एसएसडी ड्राइवको मूल्य घट्नेछ
चीनसँग यु.एस. का युद्ध युद्ध फिर्ता हुने बिन्दुमा पुग्यो
निमसेस, बिटकॉइन, टेस्ला: वित्तीय पिरामिडहरू
मलाई फिर्ता कल गर्नुहोस्, कृपया - सम्बन्ध विच्छेद कुनै सीमा थाहा छैन
घर जग्गा द्वारा सुरक्षित एक :ण: यो के हो
ह्यारी पॉटर (ह्यारी पॉटर): एक सफल खरीद
स्नीकर्सका लागि फेसन के हो - वसन्त-गर्मी २०२१
एक नजर मा JBL पोर्टेबल स्पिकर
BlaBlaBus जर्मनी मा Flixbus संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ
थर्मस स्टेनली अर्जेन्टो: अर्जेन्टिनाको लागि अनुचित मूल्य
Difeisi स्मार्ट दीपक - भविष्य आयो